I-Villa Pathio-I-Luxury Beach Front & nePhuli laBucala
IVilla Pathio yindawo entle yokuphumla elunxwemeni ebekwe eThailand engafunyaniswanga eAo Bo Mao Bay, ePathio. Imizuzu nje eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iChumphon kwindlela yaseRoyal Coast. Ibonisa iimbono ezimangalisayo zesiqithi sase-Kho Khai kunye nelali ekufutshane yabalobi. I-villa inamagumbi okulala ama-2 lilinye linomnyango wabucala, amagumbi okuhlambela e-en-suite kunye negumbi losapho elihle lokuphekela elinokufikelela ngokuthe ngqo kwiphuli. Iivillas zineesilingi ezivulekileyo ezihlanjiweyo ezimhlophe kunye neebhedi zeTeak ezi-4 zeBalinese kunye neeTV ezi-2 ze-Intanethi.
Enye yeqela leevillas ezi-3 zodidi oluphezulu ezibekwe kule ndawo imangalisayo eyilwe ngolwakhiwo lwaselwandle, iVilla Pathio yindawo ethandekayo yeholide yokuphumla kwaye ubuye umva. I-villa nganye ine-airconditioning ngokupheleleyo kunye nolawulo lwegumbi lomntu ngamnye.
Iindawo zokutyela zaselwandle zasekhaya zikufuphi okanye ukutya kwendabuko kwase-europian kunye newayini nje imizuzu eyi-10 ukuya kubahlobo bethu eSara Resort. Singalungiselela ukuqesha imoto kwisikhululo seenqwelomoya ukuze ujonge unxweme olumangalisayo kunye neelwandle zasePathio. I-Thai Massage inokucwangciswa kwi-villa yakho okanye echibini. Ifumaneka kwi-Thai Riviera, iivillas ziphefumlelwe uyilo lokuhlambela okumhlophe.
Kukho iibheyi ezininzi ezintle kunye nembonakalo yonxweme kwi-15 km radius.
-Isiqithi saseKoh Khai simalunga nemizuzu eli-15 ngesikhephe sendawo, unokuntywila ujikeleze isiqithi okanye uqeshe isikhephe esihamba ngesantya sosuku elunxwemeni.
- Laem Thaen malunga 5 imizuzu. Imbonakalo entle yepanorama ukusuka kumhlaba ophakamileyo ukubona iAo Bo Mao kunye nentaba. ngaselunxwemeni.
-Thung Sang Beach. Kumalunga nemizuzu eli-15 ukuqhuba ukuya kunxweme olude olungabonakaliyo lwesanti emhlophe kwaye ungakonwabela ukuqubha kulwandlekazi oluhle.
IiVillas ziyafumaneka ukuze zibhukishwe ukususela ngo-Oct 2019. Izitshixo ziyafumaneka kumgcini-ndlu ohlala kufutshane.